Ko Mya Aye – လက်ရှိ ရခိုင်ပြည် ကျော်နီမော်အရေးအခင်းအပေါ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမြအေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
(Photo – Ko Mya Aye (MoeMaKa))
30 Responses to Ko Mya Aye – လက်ရှိ ရခိုင်ပြည် ကျော်နီမော်အရေးအခင်းအပေါ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမြအေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ု့khin on June 6, 2012 at 4:52 am
ကိုမြအေး ကို လေးစားပါတယ်။ ပွင်.ပွင်.လင်းလင်း ဖြေဆိုသွားတာ ကြိုက်တယ်။ အကြမ်းဖက် မူ.ဟာ အဖြေ မဟုတ်ပါဘူး အေးချမ်းစွာ ဖြေရှင်း မှသာ အဖြေ၇မှာပါ။ အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းရင် သူ.အမှား ကနေပီး ကိုယ်.အမှားဖြစ် စေ တာ အထူးသတိထားစေချင်ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်း ပြသနာမှာ နမူနာပါပဲ။ ကျွန်တော် တို. နိုင်ငံမှာ နှစ်ရှည် စွာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေလာ တဲ. အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေကို ရိုဟင်ဂျာ နဲ.ေ၇ာ ပီးမမြင် တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာမှာ ဖြေရှင်း၇ာမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ. ထိရောက်တဲ. ကာကွယ် ဖြေရှင်းနည်းတွေ နဲ. ဖြေရှင်း၇မယ်။ ပြည်သူ အားလုံး ကို ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင်စည်းရုံး ရမယ်။ ကမ္ဘာ ကလည်း လက်ခံ လာ အောင် ပညာပါရမယ်။ အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်း ရင်တော. ရလာဒ် အဖြေဟာ ပြောင်းပြန်ဖြစ် သွားနိုင်တယ် ။ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဖြေရှင်းသူတွေ ပါလက်စတိုင်း -ဂျူး ပြသနာ က နမူနာကို တွေ ကို သေချာ လေ.လာပီး အဖြေ၇ှာသင်.ပါကြောင်း သတိပေးချင်ပါတယ်။
ဖိုးထောင် on June 6, 2012 at 5:36 am
မေးတဲ့မေးခွန်းတွေက သိပ်ကောင်းသလို ဖြေသွားတာတွေကလည်း ထိထိမိမိရှိပါတယ်။ ဒါမှ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်လို.ပြောလို.ရပါတယ်။
Good attitude* on June 6, 2012 at 6:57 am
Good and unbiased attitude!
Draw or confirm the reasonable law , then practice according to law….
win mon on June 6, 2012 at 9:37 am
I very proud of you .ko Mya aye
Kaman on June 6, 2012 at 10:45 am
ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ဖွား ကမန်လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။မြန်မာပြည်ဖွား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလို ကျွန်တော်တို့ ရခိုင့်ပြည်ဖွား ကမန်လူမျိုးတွေလည်းကြုံနေရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် က တရားမဝင် ခိုဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့လည်း ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ကမန်တွေဟာ ရှေး၇ခိုင်ဘုရင်တွေခေတ်က ပင် လှဲသည်တော် တွေအဖြစ် ရခိုင့်ထီးနန်းမှာ အမှုးထမ်းလာခဲ့တာပါ။ အခု ခိုးဝင်လာသူတွေကြောင့် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာမှာ ကျွန်တော်တို့ပါ ကြားညပ်ပါနေပါတယ်။
Kyaw Moe on June 6, 2012 at 9:43 pm
ိ်မင်းက ကမန်လူမျိုးတစ်ယောက်လို့ပြောပြီး ပြောနေတယ်ဆိုတော့ ငါလည်း ကမန်လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။အထက်ပါ မင်းရဲ့ပြောပြချက်ကို ငါကိုယ်တိုင်က လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းတစ်ခုရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ရခိုင်ပြည်ကို ၀င်လာနေတဲ့ ဘဂ်လီ ရခိုင်(ဗုစ္ဒ)တွကိုပြောနေတာလား။ မင်းအနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့် ရခိုင်ပြည်ကနေ တစ်နေ့တစ်ခြား
ထွက်သွားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နေ မွတ်စလင်မ် တွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တစ်ဘက်နိုင်ငံတွေကို ထွက်သွားတာဘဲ ရှိတယ်လေ။
မင်ပြောနေတဲ့ ဘဂ်လာ ကနေ ၀င်လာတယ်ဆိုတဲ့ တင်းစာ ခိုင်လုံမှုရှိလို့လား။ ကြည့်ရသလောက်တော့ ဘဂ်လာ ကနေ၀င်လာ
တဲ့ လူတွေက ရခိုင်ဖြစ်နေတယ်။စစ်တွေ မြို့နယ် လ၀က ရုံးက စာရေးမတွေတောင် အနောက်သားတွေဖြစ်နေတယ်(အ၀ကျွန်းသား ဘင်္ဂလီတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ ဘင်္ဂလီ ရခိုင်တွေ လာပြီး အစိုးရအမှုထမ်းလာလုပ်တယ်ဆိုတာာကို မင်းလည်းနားလည်မှာပါ။ စစ်တွေ လ၀က မှာ အမှုထမ်းတော်တော်များများဟာ ဘင်္ဂလီရခိုင်တွေဆိုတာ သိလားလို့ပါ။
Khine Kyaw on June 7, 2012 at 6:57 pm
KYAW MOE…if you don’t know about Rakhine history..please keep quiet or read Rakhine history. In Rakhine Nationality..No meaning of Bengali Rakhine.
Appreciated Ko Mya Aye.
u tin on June 6, 2012 at 10:46 am
Thanks Ko Mya Aye.
We all people respect you & 88 group.
In this case, we clearly can see that 88 group is really love our country.
Some party & some people may not want to get involved in this case because very dangerous.
But 88 group immediately voice out & they take very prompt action.
They never think for their benefit, only think for the benefit of country.
Especially, Ko Mya Aye, the way he talk here & the way he acted at the mosque-demonstration yesterdays shows that he is very brave.
We proud for you.
I am Buddhist, but I can say You Ko Mya Aye is my brother.
Our hope on 88 group becomes higher & higher.
Khine Yae Htat on June 6, 2012 at 10:49 am
I am an Arakanese . I really am with you. Everyone must respect the law. And any perpetrators must be brought to Justice! Crime is every where. Crimes should not be coloured with any race or religions. Again I really respect you. And I also would like to request you to help console the current situation from escalating.
Pho Phwa on June 6, 2012 at 11:50 am
ရွှေဥာဏ်တော် on June 6, 2012 at 12:04 pm
ကိုမြအေးဖြေတာတွေဖတ်ရတာ အင်မတန်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ့်ကို အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် ပြင်းပြသူတစ်ဦးလို့ ခံစားရပါတယ်။ အမြင်ရော အပြောပါ ထိရောက်လှပါတယ်။ ဦးဥာဏ်ဝင်းလို အစည်းအဝေးမထိုင်ရသေးလို့ ဘာမှမပြောနိုင်သေးပါဘူး ဆိုတာနဲ့တော့ တစ်ခြားစီပါ။ ကျနော်တို့ သန်း ၆၀ အမြင်နဲ့သာသွားရပါလ်ိမ့်မယ်။
kyaw than on June 6, 2012 at 1:14 pm
ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့မဟုတ်ပါ။ သူတို့အခြားဘာသာဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့က ဆန့်ကျင်မှာပါ။
htinzarkyin on June 6, 2012 at 9:32 pm
လေးစားပါတယ် ကိုမြအေး နှင့်၈၈ မျိုးဆက်များ
soe thiha on June 6, 2012 at 1:30 pm
Thanks for sharing your opinion Ko Mya Aye. I am very much appreciated. I deeply respect you, 88 Generation Students leaders and peace loving people.
Kyaw Htwe on June 6, 2012 at 2:00 pm
လေးစားပါတယ်ဗျာ ပြောဆိုချက်တွေက ရှင်းလင်းပြီးပြတ်သားပါတယ်
မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူတဲ့သူတွေအားလုံး
စည်းလုံးစွာနဲ့ ပြောဆိုနေထိုင်ရမဲ့အချိန်ပါ ရာဇ၀တ်မှုကို ဥပဒေကြောင်းအရ
အရေးယူရမှာပါ တစ်ခြားမလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်ပေါ်ရမဲ့ အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။
Myo Aung on June 6, 2012 at 3:00 pm
ကိုမြအေးဖြေတာတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ တကယ်စိတ်ထဲ့မှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာဆိုရင်တော့ ပိုပြီးလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အခြေအနေကိုတော်တော်သဘောပေါက်တဲ့၊ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့သူတယောက်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဓိကပြသနာအရင်းအမြစ်က ရိုဟင်ဂျာလှုပ်ရှားမှု့ပါ။ ဒါကိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းမို့ မထောက်ခံသင့်ဘူး။ ပြသနာပိုကြီးလာနိုင်တယ်။ အပြစ်ကျူးလွန်သူအားလုံးကို ဥပဒေအရ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူရမယ်။
ုkochitpe07 on June 6, 2012 at 4:10 pm
ကိုမြအေးကိုအရမ်းလေးစားပါတယ်..ကျနော်ဟာရခိုင်လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ..ဒါပေမယ့်ကျနော်ဟာဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာကိုမှမမုန်းတီးပါ..ကိုမြအေးပြောသလိုအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူကိုဥပဒေအရထိထိရောက်ရောက်အရေးယူရမယ်..လူကိုလူချင်းသတ်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အပြုအမူလို့မြင်ပါတယ်.. ကျနော်တော့နိုင်ငံမှာဒီလိုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆက်မူ..ဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတွေဟာ..တိုင်းပြည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အချက်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်..နောက်ဆုံးပြောချင်တာက လူမျိုးရေး ဘာသာရေးကိုရှေ့တန်းမတင်ပဲ အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသားညီအကိုမောင်နှတွေလိုမြင်တတ်ရင်ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်သာယာလိမ့်
Khin Moe on June 6, 2012 at 5:37 pm
I admire you ko Mya Aye and Min Ko Naing. Both of you are very brave and honest.I admire all of 88 generation leaders and other selfless politicians. I am Burmese and Buddhist. I respect you, your religion and nationality. I have many Muslim friends and teachers. I always admire and thank *Sa Yar Gyi U RA Zat* who sacrifice her life for our country. I also respect other nationalitie and religions. Thank you very much for your standing among dangerous situation. Yes, it is right, I strongly agree with you. *ဆရာတော်ကြီးတွေ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေရော အကုန်လုံး ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းသင့်တယ်*. I think all politicians who really love our mother land should help to reduce hate each other. We all should love and forgive each other . We all are human being. I clearly see how you love Burma and how much you worry about current situation. I wish may you haveapeaceful and happy life! I wish to change current situation to better situation soon! We never forget Muslim brothers help Burmese and other nationalities. Please stop revange each other! Let’s go forward together to get the better and peaceful future!
Khin Moe on June 6, 2012 at 5:42 pm
Please forgive my spelling mistake above scentence.
I always admire and thank *Sa Yar Gyi U RA Zat* who sacrifice his life for our country.
Morn Razagree on June 6, 2012 at 5:48 pm
I am an Arakanese. I value your words. We clearly see So-called Rohingya and Myanmar Muslims are not the same. We are opposing So-called Rohingya and their supporters, but not Islam, not Myanmar Muslim. And please also guide your daughter not to follow the fake movements of so-called Rohingya. It is dangerous for Arakanese, Burmese, and Myanmar Muslims. Thanks!
ပါကြီးဖိုး on June 6, 2012 at 6:23 pm
ကိုမြအေးကို မြန်မာနိုင်ငံသား သန်း ၆၀ ရဲ့အရေးအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် လေးစားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ မူဆလင်ဘာသာဝင်များအားလုံး ကိုမြအေးလို ရှင်းလင်းတဲ့ ဘာသာရေးအမြင် တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် မွေးနိုင်ကြပါစေ။
Aung lwin on June 6, 2012 at 7:37 pm
I am totally with you Ko Mya Aye.All the respect to you.
zaw zaw on June 6, 2012 at 9:57 pm
လေးစားပါတယ်ကိုမြအေး ကျွန်တော်လည်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်မြန်မာနိင်ငံသားတစ်ယောက်ပါရာဇ၀တ်မှူကျူးလွန်သူတွေကိုသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဏ်ဒဏကိုသူတို့ကျခံပလေ့စေပေါ့နော် ဖိနပ်ဆိုက်ငယ်နေတာကိုခြေဖ၀ါးကိုဖြတ်ပြီးညှိုနေမယ်ဆိုဘယ်ကလာသဘာဝကျမလဲနော် အဓိက ကတော့လူမျိုးရေးကိုဗန်းပြပြီးနိင်ငံရေးလုပ်ကွက်ထွင်ခံရျွှာကိုအကြောက်ဆုံးပါဘဲ နိင်ငံပိုင်သတင်းစာကစာတည်းအဖွဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ အင်မတန်သေးသိမ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်လောက်ဘဲရှိတာဘဲဆိုတာလယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလိုမြင်နေပါတယ် ကိုမြအေးလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသား
သပြေကုန်းသား on June 6, 2012 at 10:19 pm
လက်၇ှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ အလွန်အင်မတန် သင့်လျော်သော တင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မေးသူဖက်က ချက်ကျလက်ကျမေးတတ်သလို ဖြေဆိုသူ ကိုမြအေး အလွန်လျော်ကန်သင့်မြတ်စွာဖြေသွားတယ်လို့ ခံစား၇ပါတယ်။ ကိုမြအေး၇ဲ့ ၇င်ထဲကခံစားချက်အမှန်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးလို့ သက်၇ှည်ပါစေ၊ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူ့အကျိုးကို ဆထက်ထမ်းပိုး သယ်ပိုးထမ်း၇ွက်နိုင်ပါစေ လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဆုတောင်းပေးပါတယ် ကိုမြအေး။
Myat Mon on June 7, 2012 at 11:33 am
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်၊ ကျွှန်မလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်ပါ၊ ကိုမြအေးလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးကျွှန်မ မှာလည်းရှိပါတယ်၊ လေးစား ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုမြအေး။
စောလှ on June 7, 2012 at 11:54 am
ကျွန်တော်က ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်ပါ ကိုမြအေးကိုလေးစားပါတယ် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲက လူမျိုးဘာသာမရွေး ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေအားလုံး
မွေးကြပါစို့ ဒါတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အဓိကတစ်ချက်အပါအ၀င်လို့ယုံကြညပါတယ် ရခိုင်အရေးအမြန်ဆုံးပြေလည်ကြေအေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သတိယပေးနေပါတယ် ဘေးနိုင်ငံတွေက တော်တော်ခရီးပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ မီးမှန်ရေမမှန် လူမျိးဘာသာ ပြသာနာတွေနဲ့မကြုံစေချင်တော့ပါဘူးဗျာ အားလုံးတက်ညီလက်ညီ နားလည်မူများစွာနဲ့ သွားကြပါစို့ နော်တက်လာမဲ့ လူငယ်ခလေးတွေအကောင်းဆုံးပေးဆပ်ကြပါစို့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင်ခံခဲ့ရပြီးပြီး အခု အခြေအနေလေးနည်းနည်းကောင်းလာပြီးလာဆိုပြီး အားတက်ချိန်မှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကြားရတော့စိတ်မကောင်းဘူး ၈၈တုန်းက လူသတ်တဲ့မြင်ကွင်းတွေ တီဗီကနေ လွင့် သွားတဲ့မြင်ကွင်းတွေ အခုထိမမေ့နိုင်သေးဘူး ဒါကြောင့် အဲဒီလိုမြင်ကွင်းတွေလုံးဝ ဝေးလွင့်သွားစေချင်ပါတယ်
မမြင်ချင်တော့ပါဘူး (ကိုယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လော့) ချစ်ခြင်းတရားပွားများနိုင်ကြပါစေ.
nandarhlaing on June 7, 2012 at 4:55 pm
ကောင်းလိုက်တဲ့ ၊တော်လိုက်တဲ့ကိုမြအေးရယ်..တကယ့်ကိုချီးကျုးပါတယ်..ရိုဟင်ဂျာအရေး ကိုပြည်တွင်း
နေ အစ္စလာန်ဘာသာအရေးမလုပ်ပါနဲ့လို့ ပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းဟာ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဖွား
အစ္စလာန် ကိုသေသေချာချာခွဲပြလိုက်တာပါ၊ ကိုမြအေးဟာ တကယ့်ကို နိုင်ငံရေးသမားစစ်တယောက်ပါ
လို့ ကျနော်တော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုမြအေးလိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းဖြင့်..
wai yan phyo swe on June 7, 2012 at 10:17 pm
i respect you so much ko mya aye.you are so clever.we myanmar country need the people like you so much.
myokyi on June 7, 2012 at 11:50 pm
အဲဒီမျိုးဆက်တွေ ရဲ့စိတ်ထဲမှာ မလုံခြုံမှုတွေ၊၀မ်းနဲမှုတွေ၊ကျေကွဲမှုတွေ ရှိနေရင် ဒို့တိုင်းပြည်အတွက် အင်အားတတပ်တအားလျှော့ပေတော့မပေါ့၊
ဒီလူတွေလဲ တခြားက၀င်လာသူတွေ၊ ဒီနိုင်ငံကိုဒုက္ခရောက်စေမဲ့ သူတွေကို နှစ်မြို့နိုင်မှာမဟုတ်ဖူးလို့ယုံကြည်တယ်၊
ဒီနိုင်ငံမှာမွေးလာသူတွေဟာ ၊၀င်လာသူတွေနဲ. မည်သို့မှ တူစရာအကြောင်းမရှိပါ၊
မဖြစ်သင့်တာတွေ လုပ်လိုက်လို့ ဂုဏ်မြင့်စပြုနေတဲ့ဒီနိုင်ငံ နောက်ကြောင်းပြန်လှဲ့များသွားရင်ဖြင့်-နိုင်ငံသားအား
powerfivefour on June 8, 2012 at 11:34 pm